Mareykanka oo ka baxay heshiiskii Talibaan iyo duqeyn ka dhacday Jelmand | Allbalcad Online
Home CAALAMKA Mareykanka oo ka baxay heshiiskii Talibaan iyo duqeyn ka dhacday Jelmand
Mareykanka oo ka baxay heshiiskii Talibaan iyo duqeyn ka dhacday Jelmand
Mareykanka ayaa qaaday duqeyn dhanka cirka oo lagu beegsaday dagaalyahnada Taliban,kaas oo ka dhacay gobolka koofurta Afghanistan ee Jelmand.
Saraakiisha Amerikaanka ayaa isniintii shalay sheegay in arrintan ay ka dambeysay markii weeraro waa weyn Taliban kula wareegeen saldhigyo muhiim ah oo gobolka ku yaala.
Weerarada ayaa dhacay maalmihii u dambeeyay waxaana uu ahaa kuwa nadir ah oo Mareykanku ku beegsado Taliban tan iyo markii la saxiixay heshiiskii u dhexeeya labada dhinac bishii Fibraayo.
Afhayen u hadlay ciidanka Mareykanka Col. Sonny Lehhett ayaa Twitter soo dhigay in weerada ay ahaayeen kuwo ku xiran heshiiskii Taliban iyo Mareykanka wada galeen isla markaana ciidanka Afghanistan sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka ah Taliban.
Gen. Scott Miller, oo ah taliyaha ciidamada shisheeye ee Afghanistan ayaa Taliban ugu baaqay in ay joojiyaan dagaalka ka socda gobolka Helmand, isagoo sheegay in howlgaladan ay waxyeeleyn karaan heshiiskii Taliban iyo Mareykanka.
Dagaalka ayaa sii socda iyadoo ay dhinaca kalena jiraan wadahadalada nabadda uu dhexeeya Taliban iyo Afghanistan kuwaas oo bishii hore ka furmay magaalada Dooxa ee Qatar.
Afhayeenka Taliban Zabihulah Mujahid ayaa sheegay goobihii ay la wareegeen kooxdan ayaa lagala wareegay gacan ku haynta bilo yar ka hor. “Ma jiraan wax isbeddelo cusub ah oo dhacay.
Taliyaha booliiska gobolka Helmand Gen. Khaliilu Raxmaan Jawaad ayaa wariyeyaasha u sheegay in tallaabooyin xeeladaysan la qaaday si looga hor tago khasaaraha soo gaaraya ciidanka ammaanka isla markaan dhowaan amar iyo kala dambeynta la soo celin doono.
Waxaa uu intaas ku daray in ciidanka cirka ee Afghanistan ay qaadeen weeraro lagu dilay in ka badan 170 ka tirsan Taliban 24 saac ee la soo dhaafay.
Previous articleXildhibaan Calasow oo ka hadlay Shaqo joojin lagu sameeyay
Next articleMaxkamadda Ciidamada Jubbaland oo xukun dil ah ku ridday eedeysane ka mid ah Al-Shabaab